Guddiga fulinta ee Xisbiga Midowga Nabadda iyo Horumarka UPD oo ka arrinsaday sidii loo dar dar galin lahaa howlaha Xisbiga. – UPD – Midowga Nabadda & Horumarka
June 28, 2020 0 Comments by Abdifitah Ahmed	in News
Xubanaha ayaa kulan aan caadi ahayn oo uu shir guddoominayey Guddoomiyaha Xisbiga Mudane Xassan Shiekh Maxamuud ku yeeshay qaab online iyaga oo ka wada arrinsaday sidii loo dar dar galin lahaa barnaamijyada muhiimadda leh ee Xisbiga.
Kulankaan waxaa sidoo kale looga dooday hadal jeedintii Gudoomiyaha Guddiga doorasha taas oo xisbigu isla gartay ina ay ahyd muddo kordhin aan la aqbali Karin islamarkaana ah arrin aysan umadda Soomaaliyeed ka fileynin Guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka Qaranka.
Xubnaha Fulinta ee Xisbiga ayaa sidoo kale soo dhaweeyey matalaadii golaha shacabku shalay ansixiyay ee gobolka Banaadir, asaga oo u mahad celiyay Xildhibanada xisbiga ee ka qaatay dowr lama iloobaan ah.
War-saxaafadeed ku saabsan doorashada dalka